नेपाललाई यू-१६ इस्टर्न रिजनको उपाधि- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं — महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका १० स्थानमा लाम लागेर सवारी चढ्ने व्यवस्थाको थालनी गरेको छ । उपत्यकाको सबैभन्दा बढी यात्रुको चाप हुने एनएसी, रत्नपार्क, भृकुटीमण्डप, सामाखुशी, बानेश्वर, कोटेश्वर, कुपण्डोल, जडीबुटी र चाबहिलमा अब यात्रुले सार्वजनिक यातायात चढ्न लाइन लाग्नु पर्ने छ।
यस्तै एनएसीबाट बूढानीलकण्ठ जान लागेकी राधिका सापकोटा बस कहाँ पाइन्छ भन्नेबारे सूचनापाटी नराख्दा अन्योलमा परेको गुनासो गरिन् । 'लाइन त बस्ने भनियो, कुन रुटको गाडी कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्नेबारे हामीले कसरी थाहा पाउनू?' उनको प्रश्न थियो। (रासस)
प्रकाशित : पुस २, २०७४ १४:०१
गीता शर्मा श्रावण ३१, २०७५
भारतीय सहरबाट नेपाली महिलाको उद्धार गरिएका खबर आइरहेका हुन्छन् । भारतीय महिला आयोगले दिल्लीबाट १६ नेपाली महिलाको उद्घार गर्‍यो । त्यसको एक सातामै बनारसबाट १६ महिलाको उद्घार...
भवानीश‌ङ्कर भट्टराई श्रावण ३१, २०७५
सामान्यत: सर्प र नागलाई एउटै प्रजातिको भनिन्छ । शास्त्र अनुसार भने सर्प पृथ्वीवासी हो भने नागचाहिंँ पाताल निवासी । त्यसैले यी दुई आकार, स्वभाव, गुण आदि सबै...
डा. टीकाराम भण्डारी श्रावण ३०, २०७५
हप्ताभर छापामा धेरै मन छुने समाचारहरु आए, हत्या, बलत्कार, सडक दुर्घटना र अन्य धेरै दु:खद खबरहरु । नकरात्मक सोच, नकारात्मक समाचार सुन्न बानी परेका हाम्रा...
सम्पादकीय श्रावण ३०, २०७५
कुन कर्मचारीलाई कहाँ सरुवा गर्ने अधिकार निजामती संगठनलाई हुँदैन । संगठनका नेताहरू भने प्रशासनयन्त्रलाई आफ्नो इसारामा चलाउन चाहन्छन् । सक्ने भए नचाउनै खोज्छन् । नपाए भनाभन गर्छन् । सके...
कृष्णप्रसाद पौडेल श्रावण ३०, २०७५
भारतमा तीन वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा आमाको दूधमा हानिकारक रसायन भेटियो । त्यस्तै तथ्य अन्य मुलुकमा गरिएका अनुसन्धानमा पनि पाइएको छ । बच्चाका लागि पोषिलो भनिने आमाको दूधमै...
तारानाथ दाहाल श्रावण ३०, २०७५
नेपालको संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल कानुन आयोगबाट मस्यौदा भई कानुन मन्त्रालय...